तीन वर्षदेखि सेतो सर्पले यी किशोरीलाई पछ्याउँदै, ३४ पटक डस्नुको पछाडि यस्तो कारण ? | KHABAR VIDEO
Home / NEWS / तीन वर्षदेखि सेतो सर्पले यी किशोरीलाई पछ्याउँदै, ३४ पटक डस्नुको पछाडि यस्तो कारण ?
तीन वर्षदेखि सेतो सर्पले यी किशोरीलाई पछ्याउँदै, ३४ पटक डस्नुको पछाडि यस्तो कारण ?
about 7:32 PM Add Comment NEWS Edit
तीन वर्षदेखि सेतो सर्पले यी किशोरीलाई पछ्याउँदै, ३४ पटक डस्नुको पछाडि यस्तो कारण ? भारतकी यी किशोरीलाई एउटा सर्पले ३४ औं पटक टोकेपछि उनी अस्पताल पुगेकी छिन् । यतिधेरै पटक टोकेपनि यी किशोरीको शरिरमा विषको कुनै असर देखिएको छैन । जसका कारण डाक्टरहरु चकित परेका छन् ।
अमर उजालाका अनुसार तीन वर्षदेखि एउटा सर्प यी किशोरीलाई लगातार पछ्याइरहेको छ । कहिले घर, कहिले स्कूल, उनी जता गएपनि सर्प आएर डस्ने गर्दछ ।
१७ वर्षीया मनिषालाई पटक–पटक सर्पले डसिरहेको छ तर उनी हरेक पटक बच्ने गर्दछिन् । शनिबार बिहान मनिषा आफ्नी आमासँगै घाँस काटिरहेकी थिइन्, यति नै बेला सर्पले उनलाई टोक्यो । उनलाई अर्धचेत अवस्थामा अस्पताल ल्याइएको थियो । भारतस्थित नाहान अस्पतालमा ५/६ घण्टापछि मनिषालाई होस आयो र उनले आफूमाथि बितेको पुरा घटना बताइन् ।
मनिषाको हातमा सर्पले डसेको निशाना पनि छ । उनका अनुसार उक्त सेतो सर्प उनले मात्रै देख्छिन् । जब यो सर्प आउँछ तब उनी हल्लिन पनि सक्दिनन् न नै चिच्याउन सक्छिन् । उनलाई डसेपछि सर्प जान्छ र केही बेरपछि विष पनि शरिरबाट उत्रन्छ ।
सिरमौर जिल्लाको पोटा मानल पंचायतको मानल गाउँकी मनिषासँग निकै वर्षदेखि यस्तो भइरहेको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने चमत्कारिक ढङ्गले हरेक पटक विष निस्कन्छ । उनलाई तीन/चार पटक मात्रै अस्पताल पुर्याइयो । ज्योतिषहरुले यसबारे अचम्मित गरिदिने खुलासा गरेका छन् ।
उनका परिवारले यसबारे ज्योतिषीसँग पनि कुरा गरे । उनीहरुका अनुसार मनिषाको यो नागसँग पूर्व जन्मको सम्बन्ध छ जसका कारण उनलाई नाग आउने पूर्वाभास हुन्छ । नाग आउनेबित्तिकै उनी मोहित हुन्छिन् ।
थुप्रै ज्योतिषीसँग सल्लाह गर्दा बताइयो कि नागलाई उनको मनुष्य रुप राम्रो लाग्दैन । थुप्रै पटक एक दिन र हप्तामा तीन–चार पटक पनि डसेको छ । तर उनको यो विष आफसे आफ कसरी हराउँछ, यसमा डाक्टरहरु अचम्मित छन् ।
मनिषाका अनुसार नयाँ वर्षको दिन उनका साथीहरुले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा साथीले बधाई दिन आएन त भनेको केही घण्टा पछि नै मनिषालाई एक पटक पुनः सर्पले टोक्यो । उक्त घटनाले उनका साथीहरु पनि डराएका थिए ।
तर मेडिकल साइन्सले भने यसलाई स्विकार गर्न सकिरहेको छैन । सर्पले टोकेको वा नटोकेको भन्नेबारे विभिन्न परिक्षण पछि मात्र जानकारी हुने भएकाले यसबारे आफूहरुले केही भन्न नसक्ने बताएका छन् । उनको स्थिती निकै सामान्य रहेको डाक्टरको भनाई छ । पटक–पटक सर्पले टोकिरहने विषयलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने डाक्टरहरुको भनाई छ ।